Isbedelka Cimilada ayaa saameyn ku yeelan doona magaalooyinka in ka badan miyiga | Saadaasha Shabakadda
Isbedelka cimilada ayaa saameyn ku yeelan doona magaalooyinka in ka badan miyiga
Jarmal Portillo | | Isbedelka Cimilada, Mawjadaha kuleylka
Isbedelka Cimilada ayaa saameyn kala duwan ku leh meelo kala duwan. Caadi ahaan isbeddeladan saameyntu waxay ku kala duwan yihiin baaxad weyn ama joog / latitude adduunka. Guud ahaan, isbeddelka cimilada wuxuu leeyahay saameynta kuleylka sii kordhaya, laakiin kororkaan ma noqon doono isku mid meelaha oo dhan.
Daraasad ayaa lagu sheegay in kororka kuleylka uu saameyn ku yeelan doono magaalooyinka in ka badan tan dabiiciga ah iyo in haddii heerka kororka hadda uu sii socdo, saameynta hirarka kuleylka ee magaalooyinka ay ku labanlaabi karaan afar. Ma dooneysaa inaad wax badan ka ogaato cilmi baaristan?
1 Saamaynta heerkulka sii kordhaya
2 Cawaaqibka kuleylka adduunka ee magaalooyinka
3 Mustaqbalka soo socda
Saamaynta heerkulka sii kordhaya
Daraasaddan oo ku saabsan sida heer-kulku u saameyn doono magaalooyinka iyo deegaanka dabiiciga ah waxaa fulisay Jaamacadda Leuven (Belgium) waxayna leeyihiin gabagabo aad u adag oo ay ku soo bandhigeen shirkii ay Midowga Yurub ee cilmiga dhulka ku yeesheen Vienna.
Mid ka mid ah qorayaasha ugu waaweyn ee cilmi baarista heer kulka ayaa loo yaqaan Hendrik Wouter ayaa sheegtay in saamaynta taban ee isbeddelka cimilada xagga heer kulka ay ka laba-jibbaari doonto magaalooyinka sida aagga dabiiciga ah.
Horey ayaa loo ogaa cilmi baaristii hore in saameynta heerkulka sare ay ka weyn tahay magaalooyinka marka loo eego meelaha miyiga ah. Gaar ahaan habeenkii waxaa jira saameyn "jasiiradda kuleylka", taas oo ah kor u kaca hawo kulul oo ku xanniban dusha waddooyinka iyo laamiga oo sababa kororka heerkulka. Maxaa ka dhigaya daraasaddan mid kacaan ah waa in la qiyaaso markii ugu horeysay ilaa heerka ay magaalooyinku yeelan doonaan heer kulka sare.
Cawaaqibka kuleylka adduunka ee magaalooyinka
Waxaa jira daraasado muujinaya in hirarka kuleylka ay ku sii kordhayaan magaalooyinka, labadaba soo noqnoqoshada iyo xoojinta. Iyada oo la adeegsanayo kuleylka, isbitaalada la dhigaayo sababo la xiriira kororka fuuqbaxa, waxsoosaarka oo yaraada, waxyeelada kaabayaasha oo sii kordheysa iyo xaaladaha ugu daran, kiisaska dhimashada ayaa kordha.
Daraasaddan, cilmi baarayaashu waxay sameeyeen falanqeyn ku saabsan sida saameynta hirarka kuleylka ay ula falgalaan magaalooyinka iyo bay'adaha dabiiciga ah. Tan awgeed, waxay isticmaaleen cabbiraadaha heerkulka 35 kii sano ee la soo dhaafay ee Beljamka waxayna isbarbar dhigeen inta jeer iyo xoog ee ay dhaaftay xadka heerkulka. Xuduudahaani waxay calaamad u yihiin dhaawaca u keenay caafimaadka iyo wax kasta oo aan kor ku soo sheegnay.
Natiijo ahaan, waxaa la ogaan karaa in muddadii lagu jiray daraasadda, hirarka kuleylka ay aad uga xoog badnaayeen magaalooyinka marka loo eego baadiyaha. Tan waxaa lafilayaa inay kasii darto mustaqbalka.
Mustaqbalka soo socda
Markay helaan gunaanadka baaritaanka, waxay naftooda u hureen inay sameeyaan qiyaasid ku saabsan waxa dhici doona mustaqbalka. Qiyaasayaashu waxay ku saleysan yihiin jilitaanno lagu sameeyay moodellada kumbuyuutar lagu soo saaray. Qiyaasahani waxay saadaaliyeen in muddada 2041-2075 ay saamaynta kuleylka magaalooyinka waxay noqon doontaa afar jeer ka sii weyn tahay berrinka.
Baarayaasha ayaa cadeeyay in qiyaasahani ay u dhigmayaan xaalad dhexdhexaad ah waxayna aqoonsadeen inay jiraan arrimo fara badan oo saameyn ku yeelan kara xisaabinta, sida hoos u dhac weyn oo ku imaaday qiiqa hawada lagu sii daayo ee jawiga ama gaabis ku yimid koritaanka magaalooyinka.
Xaaladda ugu xun ee hirarka kuleylka daran waxay noqon doontaa kordhin Heerarka digniinta illaa 10 digrii oo socon doona 25 maalmood xagaaga. Si kastaba ha noqotee, haddii qiiqa gaaska lagu sii daayo la yareeyo, waxay la mid noqon doontaa hadda.
Waxaas oo dhan, isku day ayaa la sameeyay si loo tixraaco baahida jirta ee ah in magaalooyinku dib u qaabeeyaan qaab-dhismeedkooda iyo maamulkooda ku saleysan isbeddelka cimilada. Tusaale ahaan, oo leh qaab-dhismeed magaaladeed oo toosan, yareynta qiiqa gaaska lagu sii daayo ama isticmaalka kaabayaasha wasakhda yar. Waxay yihiin tilmaamo lagu yareynayo saameynta hirarka kuleylka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Mawjadaha kuleylka » Isbedelka cimilada ayaa saameyn ku yeelan doona magaalooyinka in ka badan miyiga
Cimilo aad u xun oo lala xiriirinayo kuleylka adduunka
'Arlene' waxaa la sameeyay 40 maalmood ka hor bilowgii xilli duufaaneed